သူငယ်ချင်း မြတ်ခိုင် | MoeMaKa Burmese News & Media
အဲဒီနေ့ …. …. …. ။ ။
4 Responses to သူငယ်ချင်း မြတ်ခိုင်
sanmyintoo on June 28, 2012 at 9:14 pm
Worthy * on June 30, 2012 at 7:19 am
One comment from EMG..
#8 ppyburma 2012-06-30 03:10
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ အစား မသီတာထွေး မိသားစု ကစွဲ သင့်တာပါ။ ကိုယ်သားချင်း တစ်ဦးသာ ဒိလို အဖြစ်မျိုးကြူံပြီး ဒိလိုမျိူး Journal တစ်စောင်ရောင်းကောင်း အောင် အသုံးချခံရရင် ဘယ်လို ခံစားရမလဲ. ဘယ် Journal မှာမှလည်း ဒိပုံကို တင်တယ်လို့ မကြားမိပါ ဘူး After all, she is the poor victim of the whole case.
I strongly agree with above comment……
naing on July 3, 2012 at 2:53 pm
Almost of the people are Educated, that is why they will know what is rong or right.
san nay yar on July 7, 2012 at 1:11 am
Myat Khaing prefers popular and money to journal.
Please look back his activity.